भाडा छुट नगरियोस् र आग्रह पनि नगरियोस् | Everest Times UK
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, म्याग्दी जिल्ला शाखा
मर्दीखोला समाज युकेको राहत माइला–कान्छाले याम्दीका दैनिक ज्याला मजदुर वितरण,तीन मिर्गौला पीडितलाई स्वास्थ्योपचार सहयोग
माइला–कान्छाले एकैदिन २१५ विपन्न परिवारलाई राहत वितरण
डा. योगी बिकाशानन्दले भर्चुअलमार्फत बेलायतवासी नेपालीहरुबीच आफ्नो अनुभव सुनाउदै
बेलायतबाट आयो ग्लोबल नेप्लिज डटकम, नयाँ अनलाइनको प्रकाशन शुरु
पब्लिक हेल्थ इंग्ल्याण्ड नेपाली भाषामा सूचना उपलब्ध गराउन सकारात्मक
कोरोना भाईरसका कारण बेलायतमा ६५ जना नेपालीको ज्यान गयो
नेपाली वेलफेयर सोसाईटीद्वारा नेपाली राजदूतमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र
नेपालमा एकैदिन थपिए ११४ कोरोना संक्रमित
तमु समाज युकेद्वारा एक सय परिवारलाई राहत
एनआरएनए युकेद्वारा कोभिड–१९ सहयोग अभियानबारे रिपोर्ट सार्वजनिक
प्रधानमन्त्रीबाट एकताबद्ध भई संशोधनका पक्षमा उभिन दलहरुलाई आग्रह
In: दृष्टिकोण, युवा, जनजाती र महिला आवाज
केही दिनदेखि यो सामाजिक सञ्जालमा घरपेटीहरुको गुनासो धेरै देखियो । सरकारले १ महिनाको घरभाडा नलिनको लागि घरधनीहरुलाई आग्रह गरेका र यसका लागि घरधनीले तिर्नुपर्ने घरबहाल करमा सरकारले छुट दिने भएको मात्र थियो, घरवालाहरुको सातो नै गएछ । लौ बर्बाद भयो लौ सिद्दिने नै भयो भनेर आत्तिएका छन् ।
स्कुलको फिस, ग्यासको, बैङ्कको किस्ता बिजुली, पानी अनेक थरी खर्च पो सरकारले तिरिदिनु पर्ने रे । वर्षको १२ महिना भाडा लिएर अहिले देश नै कोरोनाको माहामारीले लकडाउनको चपेटामा परेका आफ्नै घरमा बसेकालाई पो १ महिनाको भाडा छुट दिनु भनेका हुन् रोडमा लगेर बाड्नु त भनेका होइन नि ! आफ्नै घरमा बसेका आफ्नै परिवार जस्तो एउटै छातामुनी भएकालाई पो दिन आग्रह गरेका हुन् । जबर्जस्ती खोसेरै दिन खोजेका पक्कै होइन होला ।
हामी भाडामा बस्नेको त बच्चाहरुको स्कुल फिस, बत्तिको, टेलिफोनको, बैङ्कको ब्याज आदि खर्च नै नहुने हो र ? तपाईंहरु अरुबेला मेरो घर छ । हामी त घरपेटी हौं तिमीहरुको के नै छ र भाडामा त बसेका हौ भनेर सुकुम्बासीलाई गरेको जस्तो ब्यवहार गरेर खुबै नाक ठूलो किन पार्नु पर्‍यो ? जाबो १ महिनाको भाडा लिन नपाउँदा यत्रो रोइकराई हुँदोरहेछ त !
१२ महिनामा १ महिना भाडा लिन नपाउदा यत्रो पीर हुनेरहेछ । हामी भाडावालहरुको त १२ महिना नै भाडाको पीर हुन्छ । सरकार हामी भाडामा बस्नेहरुलाई भन्दा पनि घरवालाहरुलाई यो लकडाउनले ठूलो असर पारेको रहेछ त्यसैले हामी भाडावालहरुलाई १ महिनाको भाडा छुट नगरियोस् र आग्रह पनि नगरियोस् । हामी जसरी पनि म्यानेज गर्नेछौं यस्ता बिपत्ति हामीले धेरै नै सहेका छौं र सहनेछौं।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार (१६ चैत) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन आग्रह गर्न‍े निर्णय गरेको थियो । योसँगै मन्त्रिपरिषद्ले घरभाडा मिनाहा गरेबापत घरधनीले सम्बन्धित महिनाको घरबहाल कर मिनाह दिने निर्णय गरेको छ ।
हामी त घरपेटी हौं तिमीहरुको के नै छ र भाडामा त बसेका हौ भनेर सुकुम्बासीलाई गरेको जस्तो ब्यवहार गरेर खुबै नाक ठूलो किन पार्नु पर्‍यो ? जाबो १ महिनाको भाडा लिन नपाउँदा यत्रो रोइकराई हुँदोरहेछ त !
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले ११ चैतदेखि ‘लकडाउन’ सुरु गरेको हो । लकडाउन सुरु भएसँगै उद्योग–कलकारखाना बन्द भएका छन्, श्रमिकहरू आम्दानीविहीन भएका छन् । यस्तो स्थितिमा ‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’बीचको दूरी कम गर्न घरभाडा छुटको निर्णय गरेको हो ।
दोस्रो पटक चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ गते मध्यरातसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गर्‍यो । यसबीचमा बिहीबार नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६ पुगेको छ । जसमध्ये १ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । उपचाररत अरु संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालहरुले जनाएको छन् ।
गत डिसेम्बर अन्तिममा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेको छ । शुक्रबार चैत २१ गतेसम्मा ५३ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसक्यो भने १० लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् । यो अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो महामारीले कति क्षति पुर्‍याउने र कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने टुंगो लगाउन विज्ञहरुले समेत लगाउन सकेका छैनन् । विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिसकेको कोरोनाका कारण निम्न आय भएका र खासगरी ज्यालामजदुरीबाट गुजारा चलाउने नागरिकहरु मारमा छन् । उनीहरुलाई लक्षित गरी नेपालसहित विभिन्न देशका सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको पनि छ । नेपालमा गैरसरकारी संघसंस्थाले विभिन्‍न प्रदेश र जिल्लामा राहत समेत बाँड्ने काम गरिरहेका छन् ।
लकडाउनले प्रभावित बनाएको तमु धीं युके